AMOL ONLINE: सुरक्षित र मर्यादित यात्राका लागि यात्रु पनि जिम्मेवार
सुरक्षित र मर्यादित यात्राका लागि यात्रु पनि जिम्मेवार
गएको शुक्रवार (१८ कार्तिक) नागरिकमा 'घचेडाघचेड, धकेलाधकल र कुदमकुदका सवारी' शीर्षकमा प्रकाशित सम्पादकीय सन्तुलित र चित्तबुझ्दो लाग्यो। 'पेट्रोलियम पदार्थ र पाटपुर्जाको मूल्य बढेको' पृष्ठभूमिमा सार्वजानिक यातायातको भाडा ९ दशमलब ९ प्रतिशत बढेपनि 'असंगठित यात्रुहरुका अपेक्षा भने ख्याल नगरिएको' तर्फ नागरिकले सम्पादकीयमा जोड गरेको छ।
"सार्वजानिक यातायातमा यात्रुहरुको भेँडा-बाख्राको हाल हुन्छ", भनेर सुनेका तर नदेखेका कोहि हुनुहुन्छ भने बिहान र बेलुकाको कार्यलय समयमा मूल बाटोमा निस्कनुहोस् ! सम्पादकीयमा उल्लेख भएझैं जोकोहिलाई पनि 'बस'को नाम 'उठ' राख्नुपर्छ जस्तो लाग्नेछ। यो त भयो काठमाडौं भित्रै यातायात गर्दाको कुरा। काठमाडौंबाट देशका विभिन्न भागमा जाने लामो दुरीका यातायातका बारेमा थाहा पाउन केहि हप्ता अघि नागरिकमै, शनिबार, प्रकाशित मनोज दहालको 'गाउँ डायरी' पढ्नुहोस्।
सार्वजानिक यातायातमा यात्रुहरु भेँडा-बाख्राजस्तै गरि कोचिनु सत्य हो र यसका अनेक कारण छन्। 'ट्राफिक प्रहरी ओझेल परेपछि जहाँबाट जसरी पनि यात्रु टिप्नु, यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित नहुनु र सरकारले पनि अनुगमन नगर्नु' केहि कारण मात्र हुन्। समस्यको मूल जडमा यात्रु स्वयं पनि पर्दछन्। गाडी भरिएको छ भन्ने देख्दादेख्दै पनि गाडीमा उक्लनु यात्रुहरुको गलती हैन र? गाडीमा सिट खाली छैन भने नचढ्ने मात्र गर्न सकेको खण्डमा पनि सेवा-सुविधाको सबालमा यात्रुहरुले ठूलो राहात पाउँने थिए।
त्यसैगरी सार्वजानिक यातायातको साधनले 'जहाँ पायो त्यहिँ यात्रु टिप्नु र ओराल्नु' दुवैमा यात्रुकै पनि दोष छैन र? यात्रुहरु आफैं सचेत भएर बिसौनीहरुको प्रयोग गर्ने भएका भए किन रोक्नुपर्थ्यो गाडीले जहाँ पायो त्यहिँ। शहिदगेट ओर्लने यात्रु भद्रकालीको बिसौनीमा नओर्लिएर शहिदगेट अगाडी, गाडी रोक्न नपाउने ठाउँमा, पुगेर गाडीवालासँग झगडा गर्ने प्रवृतिका लागि यात्रुहरु नै जिम्मेवार छैनन् र?
सम्पादकीयमा उठाइएको 'रातिको यात्रा जोखिमपूर्ण भएको' र 'रात्रि यात्राका लागि ट्याक्सीको विकल्प नहुनुले गरिब, बिरामी र श्रमजीवि नागरिकहरुमाथि असर परेको' कुरा यथार्थ हो। साथै दिवा समयमै पनि महिला, अशक्त, वृद्धवृद्धालाई सार्वजानिक यातायातमा यात्रा गर्न पुरुषको तुलनामा अझ कठिन भएको कुरा तर्फ पनि सबैको ध्यान जान र विकल्प खोजीन जरुरी छ।
यसरी सार्वजानिक यात्रालाई अझ बढी सुरक्षित र मर्यादित बनाउनलाई सरकारको अग्रसरताका अलावा यात्रु स्वयं पनि सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ।
Posted by AMOL at Tuesday, November 08, 2011
Amol, aaja yo post nagarik ma padheko thiye.. dherai dherai khusi lagyo.. Bus Yatra ko Jokhim Dashain bata farkida.. HalesiMahadev- Ghurmi- Sindhuli-Ktm ko baato ni hidnu paryo... Badhyata ta jokhim molnuparne, ke garnu..... lekhdai jaau.. pragati gardai jaau... tc
Yeah, hinjo publish gareko thiyo..anyway thanks for reading..article ma mero bichar bhaneko yatru le pani kehi garna sakchan bhanne ho..*..tara conditions applied bhane huncha nai...